Ihe kpatara Martech ji bụrụ atụmatụ dị mkpa maka uto azụmaahịa | Martech Zone
Teknụzụ ahịa anọwo na-arị elu n'ime afọ iri gara aga, ma hapụ afọ. Ọ bụrụ na ịnabatabeghị Martech, ma rụọ ọrụ na azụmaahịa (ma ọ bụ ire ahịa, maka nke ahụ), mgbe ahụ ị ga-aka mma ịbanye na ụgbọ mmiri tupu ịhapụ gị n'azụ! Teknụzụ azụmaahịa ọhụụ enyela ụlọ ọrụ ohere iji wuo mgbasa ozi ahịa dị egwu na nke atụ, nyochaa ahịa ahịa na ezigbo oge, ma mezie ahịa ha iji mee ka ntụgharị, arụpụta ihe na ROI gbagoro, ebe ọ na-ebelata ụgwọ, oge na enweghị ike. Nke ahụ bụ ihe anyị ga-ekwurịtakwu banyere ya n'isiokwu a - otu teknụzụ azụmaahịa si enyere ụdị aka ka ha too, ebe ha na-eweta uru azụmaahịa bara ụba.
Agile Marketing pụtara ROI ka mma
Imirikiti ngalaba ahịa na-atụ egwu na-emefu ego ha n’ịkpọsa ngwa ahịa n'ihi na ha echeghị na ha nwere ike ịgwa onye ga-ahụ mgbasa ozi. Nke a ga-abụ eziokwu na ụwa ochie nke ịzụ ahịa, mana, n'ụwa nke oge a, ozi a niile dị na ngalaba ngalaba ahịa.
Na teknụzụ ahịa, onye na-ere ahịa, nnukwu azụmaahịa ma ọ bụ onye nwe ụlọ ọrụ nwere ike ileba anya na arụmọrụ mkpọsa mgbasa ozi ma lelee onye na-ahụ mgbasa ozi ahụ, yana ụdị mmetụta ọ na-enwe ugbu a na ọ ga-enwe. Enwere ike ime ka ihe ndị a dị ka ihe dị mkpa iji mee ka ọtụtụ ndị ahịa si n'ọnụ ụzọ bata.
Yabụ, Martech na-eme ka mmelite na-aga n'ihu na-ebugharị okporo ụzọ ndị ọzọ ezubere iche, na-emepụta ihe ndị ọzọ na-eduga, ma na-akọghachi ROI na azụmaahịa a n'ụzọ doro anya. Dan Purvis, Onye isi nduzi na Comms Axis
Ndị ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ohere iji hone ma mepụta atụmatụ ha n'ụzọ ziri ezi site na ịme amụma amụma dị mfe. ROI bụ ihe ahịa ọ bụla ezubere iji nweta. Chọrọ ịpụ karịa ihe ị tinyere, yana iji ọtụtụ data nyochaa ma jiri chọpụta ike na adịghị ike, atụmatụ gị nwere ike ịbụ nke ziri ezi na iru karịa oge ọ bụla.
Ahịa abanyela n'oge dị ukwuu nke mgbanwe dị mma, ọ bụkwa site na mmepe nke teknụzụ ọhụrụ na usoro ka enwere ike.
Martech tinye Onye Ahịa gị na mbu
Ahịa na-adabere mgbe niile na data ndị ahịa na nghọta. Mana, ka enwere data dị karịa, usoro na usoro maka iji na nyochaa data a abụrụla nke mmadụ.
Industrylọ ọrụ ahụ enwetawo isi ihe dị mkpa site n'inwe ọtụtụ data ma ghara ịghọta n'ezie ihe ọ pụtara ma ọ bụ otu esi enyere ha aka, na-enwe ike ịgbaso ya niile na ezigbo oge ma nweta ihe ọmụma bara uru na nke bara uru site na ya.
Dịka, ọrụ nke marketer (yana ngalaba ahịa ọ bụla) agbanweela karịa okike. Ọ ghọọla usoro dị mkpa maka uto azụmaahịa site na ịgbakwunye akwa sayensị na esemokwu na nyocha mgbasa ozi. Enweghị ebe ịzo ezo, mana ebe ọ bụla ị ga-eto.
Nbili nke Ahia Ahia
Ọrụ ahịa apụtala dị ka ubi na-atọ ụtọ nke na-achịkọta ngwa ngwa n'ihi mmetụta ọ nwere na azụmaahịa 'ịchụpụ ROI a na-ahụ anya na nke a pụrụ ịtụle. Ọ na-ahazi usoro gị na usoro gị n'usoro, ma site na teknụzụ ma na usoro ọrụ azụmaahịa na mpụga ngalaba ahịa. Ọrụ ahia zuru oke bụ ihe dị mkpa iji tinye azụmahịa niile na imezu ebumnuche gị.
A na-ekwukarị banyere nkewa nke ngalaba, mana a na-eleghara sila-ngalaba ngalaba silos anya. Iji maa atụ, n'ime ngalaba ahia gị, enwere ike inwe nkewa na esemokwu ọzọ. Ọrụ ahịa dị iche iche nwere ike ịrụ ọrụ na nkewapụ na-enweghị njikọ sara mbara na atụmatụ; enwere ike ijizi data, tinye ya na ezighi ezi n'ihi njehie mmadụ, ma ọ bụ chekwaa ya n'ụdị dị iche na ebe dị iche. Ụkọ nke nkwurịta okwu na-ekerekwa òkè dị mkpa n'ichebe ihe kwesịrị ịbụ ngalaba jikọrọ ọnụ.
Taa, a na-akwado ahịa site na teknụzụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịchọtaghị azụmaahịa gị dịka nke akụrụngwa na teknụzụ, ị nwere ike ijide n'aka na ọ nwere usoro teknụzụ azụmaahịa. Ma nke ahụ bụ ihe kachasị ama ama nke ngwa dịka Google Analytics,Hootsuite ma ọ bụ Mailchimp, ma ọ bụ karịa ọkachamara software maka niche gị.
Teknụzụ nwere ike inye aka n'ịhụ na a na-achịkọta usoro ndị a. Ebumnuche dị na ngalaba ahịa gị nwere ike ịdị iche mana ha nwere ike ịbụ ndị etiti, mezie ma hazie. Ihe karịrị ụlọ ọrụ 4,000 nwere ugbu a itinye ego na teknụzụ ahịa, na ọ bụ ụlọ ọrụ na-eto eto, nke azụmaahịa niile nwere ike irite uru na ya.
Ọtụtụ ndị ọkachamara n'ahịa na-ewere onwe ha "ndị okike". Na ezi ihe kpatara ya, kwa, dịka ọ bụ ihe dị mkpa nke ọrụ ha na nke buliri ahịa karịa ihe izugbe "dị mma ịnwe", inwe mmetụta pụtara ìhè na azụmaahịa ahụ. N'agbanyeghị nke ahụ, n'agbanyeghị nke a, ọ naghị achịkwa ya ka a na-ahụ ya oge niile dị ka ihe dị mkpa nke Board na C-Suite.
Agbanyeghị, dịka teknụzụ nwere ọgụgụ isi na Big Data na-aga n'ihu na-akpụzi ụzọ esi emebe mkpọsa ahịa, ọ bụ oge ịnakwere ahịa bụ sayensị. N'iji teknụzụ rụọ ọrụ, mana ka na-etinye nghọta okike nke otu gị, azụmaahịa abụrụla nka sayensị nke enwere ike tụọ, nyochaa ma nyochaa nke ọma, iji hụ na nsonaazụ kacha mma.
80% nke ụlọ ọrụ ugbu a nwee onye isi teknụzụ na-ere ahịa ma ọ bụ ihe kwekọrọ na 2015-16 Gartner CMO Spend Survey. Nke a gara n'ihu na-akwado isi na teknụzụ azụmaahịa dị ebe a ka ọ nọrọ ma na ọ gafere karịa nkwado nkwado na ngwakọta ahịa. Dika o na - enyere ire ahia aka, mmelite nke idi oru, na ochichi nke ROI azumahia a na - ahu anya, a na - acho ahia ugbua dika inwe ihe di nkpa nke na enyere aka n’uto ahia.
Site na mgbasa ozi ezubere iche, ọgbọ na ahịa ga-abawanye iji nyefee ROI dị elu. Nke a kwesịrị, ya mere, ga-ekwe ka ị izute ọ bụla na-atụ anya nke gị iche ahịa, dị ka i nwere data iji hụ na ị maara ihe ha na-achọ.
Martech abụghị ihe ọhụrụ…
Martech abughi ihe ohuru, obu ezie na mgbe aghare ya na ahia o gha eme ka njem ndi ahia gi ka nma ma mekwaa ka ahia gi site na imata ihe site na ndu ndu na ahia. Nwere ike ijide n'aka na ndị asọmpi na niche gị na-ewu ngwugwu ahịa ha, ma ọ bụrụ na ịnweghị iji ha, yabụ ịkwesịrị ime otu ihe ahụ.
Tohọrọ ileghara uru ahịa teknụzụ nwere ike iweta na azụmaahịa gị na-ahọrọ itinye onwe gị n'ọnọdụ ọghọm nke ndị asọmpi gị. Saleszụ ahịa na ire ahịa nke oge a agbanweela n'ụzọ dị oke mma site na teknụzụ; azụmahịa gị kwesịrị ijide n'aka na ọ gbanwere kwa.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ etu Martech ga - esi nyere aka bulie azụmaahịa gị, biko biko lelee Comms Axis'ọrụ - anyị hụrụ mkparịta ụka na-enweghị isi!
Tags: mmụba azụmahịankwurịta okwuibumarketingnyocha ahịaahịa dataarụmọrụ ahịateknụzụ ahịaịzụ ahịa teknụzụ ahịaahia teknụzụ atụmatụnkataMartech egoatụmatụ Martech